UNvidia uhlaziya abaqhubi bePascal ukulungisa ingxaki yoShift ebusuku kwi-macOS | Ndisuka mac
Kwiveki emva kokuba uNvidia ekhuphe abaqhubi bePascal kwi-beta ye-macOS, uhlaziyo lwe-beta lukhutshwa kwakhona ukulungisa imiba eyahlukeneyo enxulumene nohlobo lokuqala. Kule meko, ukongeza kwiimpazamo eziqhelekileyo ezinokuba nohlobo lokuqala lwe-beta, a Ingxaki yokungahambelani kobusuku kwiMacOS Sierra 10.12.4, ebimiselwe kule nguqulo 378.05.05.05f02.
Kwakukho izikhalazo ezininzi malunga noku kwaye ukusilela akuzange kuboniswe ngokufanayo kubo bonke abasebenzisi, kodwa ingxaki kuxa kusebenze olu khetho luphunyezwe kwinguqulelo yangoku yenkqubo yokusebenza yeNight Shift. Kule meko kubonakala ngathi ndikwazile ukusombulula impazamo Kungenxa yoko le nto besenza ukuba abasebenzisi bafumane uhlaziyo onokulukhuphela ukuba aluveli kude ngqo kule linki.
Abasebenzisi baya kuba nakho ukufaka ikhadi lemizobo leNvidia kwiiMacs zabo ngaphandle kobunzima obuninzi ngenxa yomqhubi omtsha okhutshelwe simahla. Okwangoku kufuneka sitsho ukuba ziindaba ezimnandi kakhulu kubasebenzisi kwaye ngakumbi abo bakwicandelo lobungcali ngubani obona kolu hlengahlengiso ngekamva elithembisayo lokusebenza kuhlelo lwevidiyo okanye nakwilizwe lokudlala, ngakumbi kwabo bathenga iMac Pro.
Emva kukaPhil Shiller, walumkisa kudliwanondlebe ukuba eApple abalilibali uluhlu lweMac kwaye iindaba eziza kuthi kungekudala zifike kula maqela anobuchwephesha ukongeza kwi-iMac entsha enamandla ngakumbi kulo nyaka mnye ukumiliselwa kwabaqhubi bePascal kwi-beta kuye kwaba luvuyo lokwenene kubasebenzisi abaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UNvidia uhlaziya abaqhubi bePascal ukulungisa umba wobusuku kwiMacOS